39% Kuwa Ganacsatada Dhaqaaluhu waa kuwo faa'iido leh | FXCC Blog
Jan 31 • Qiimaha Ganacsi ee Forex • 133264 Views 45 Comments on 3945 ee Ganacsatada Forex yihiin faa'iido
Waxaan rajeynayaa inaad tahay qof akhriyaya, ka dib markii dhan oo ay tahay inay noqoto naxdin. Hadda waxaad naftaada ka soo dejisay dabaqa, ka dib markaad aqriso cinwaanka maqaalka, taas oo ah xaqiiqo (si fiican), waxaan ku noolaan doonaa mawduuca gacanta; Maxay dad badani u lumiyaan ganacsiga forex iyo maxay yihiin isbeddelka dad badan si ay u sameeyaan si ay ugu jiraan afartan boqolkiiba ee ugu guuleysatey?
Haa, ka hor intaanan tagin wax kale oo aynu sii wadno in aan marka hore la xaajoodno 39% ee ganacsatada ku guuleystay soo iibsiga. Xaqiiqadu waxay timaadaa iyada oo la tixgelinayo asxmagnates qaybteeda casriga ah ee warbixinta oo ka hadlaysa faa'iidada iyo waxqabadka Maraykanka ee ku saleysan dacaayadaha. Tirada ugu sarraysa waxay ahayd 39.1% faa'iidada macmiilka oo ka yimid dulsaar bixiyeyaasha 24,000 xisaabfuran oo firfircoon. Waxaa sidoo kale jira waxyaabo kale oo xiiso leh oo xog ah oo u qalma in la ogaado ka hor inta aynaan guursan.
Waxaa jiray hoos u dhac ku yimid tirada xisaabaadka iyo heerarka dhaqdhaqaaqa ee 2011 halka boqolkiiba inta ganacsiyaadka faa'iidada leh ay kordheen. Tani waxay soo jeedin kartaa dhowr dhibcood oo xiiso leh, marka hore markaa si wadajir ah ayaanu si fiican ugu helnaa waxa aan qabano? Ama (iyo ma ahan mid iskeed u leh) ayaa leh 'waxqabadyo' badan oo ka soo baxay arena, dib ugu noqdeen shaqo maalmeed, iyagoo ka tegaya lambarrada si sare loogu qaado ganacsatada sare ama kuwa tayo sare leh? Muhiimadda ugu weyn ee tirada badeecadaha ayaa hoos u dhacay, kaliya waxa ugu yar ee ganacsatada ah oo ay taageeraan shirkado badan oo u hoggaansamaya shuruucda ayaa kor u qaadi doona.
Tirada xisaabaadka qisada ah ee lagu haysto baaskiilada Mareykanka ee Maraykanka ayaa ku dhacaya in ka badan 11,000 ilaa dhammaan waqtiga hoose ee 97,206
Dakhliga macaamiisha 'faa'iidada' waa 6.4% celcelis ahaan, quarter-kaan oo isku xigta oo faa'iido leh
Warshadaha dukaamada tafaariiqda Mareykanka ayaa hadda muujinaya calaamadaha muuqda ee hoos u dhacaya, tirada tirakoobyada tafaariiqda ee kharashka ku salaysan ee Maraykanku leeyahay ee ku salaysan waraaqaha ku salaysan xogta Maraykanka ee hoos u dhigaya diiwaangelinta 97,206, tiradii ugu hoosaysay ee laga soo sheego tan Q3 2010 markii markii hore la sii daayay. Xaaladda ba'an ee hirgalinta ah ayaa aad u adkeyd in baqaarrada Mareykanka ay soo jiidaan macaamiisha cusub. Si kastaba ha noqotee, macaamiisha ugu sareeya ee tobanka sare waxay ku taxan yihiin heerka ugu hooseeya ee waxtarka faa'idada ah waxay ahayd 32%.
Waa arrin xiiso leh inta qof ee naga mid ah helaya qalabka fudfududeynaya naqshadeynta muraayadaheenna marka la garaaco nooca shaxda ee keenay hogaanka qodobkan. Anigu kali kali ma'aha inaan qaato 'qiimaha wajiga' qaar ka mid ah xogta iyo fikradaha soo socda sida ganacsadaha tartiib tartiibka ah. Dhab ahaan waan ogaa 'in sawirka aan joogtada ahayn uu badanaa ku tuuray hareeraha ganacsiga; in 10% ganacsatada kaliya ee faa'iido leh, ay ahayd wax micno ah.
Marka la weydiisto heerka maamulka iyo akhrinta warbixinta sirdoonka ee maalgashiga dhamaystiran, tirada saxda ah ee guusha waxaa lagu qiyaasay 20%, labalabee malaha hore, laakiin 39% ayaa dhab ahaantii qaadatay dad badan oo la yaabay markii ugu horeysay ee la daabaco, xittaa si ka sarreeya Toban buudhiyaal oo Maraykan ah ayaa leh macaamiisha ku raaxaysanaya heerka 32% ee guusha. Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, waxaa la yiraahdaa tuugo, boqolkiiba labaatanna waxaa ku jira waraaqo faafin ah oo aragti ahaan laga yaabo in ay isha ku hayaan xogta sababtoo ah ganacsatada aadka u sii xumaanaya (kuwa ugu badan) marka loo eego ganacsatada saafiga ah ee ganacsiga, aragti ku haboon in la baaro taariikh dambe.
Su'aal badanaa oo kordha nooca noocan ah ee guusha noocan ah waa "Miyay tahay boqolkiiba tiro yar oo ganacsatada guuleysta ee ka soo horjeeda xisaabtan?" Laakiin guud ahaan boqolleyda, celceliska iyo qaybinta macluumaadka kala duwan ayaa u shaqeynaya sidan, waana inaan hore u ogaanay inay tahay ganacsade. Haddii dhererka 40 boqolkiiba ee ganacsigu ay faa'iido yihiin markaa sawirka boqolkiiba ee ganacsatada dhabta ahi ay faa'iido u yihiin waxay u dhowyihiin lambarkan.
Qodobka koowaad waxaan soo qaadnay su'aasha ah sababta ganacsatada badani wax aan faa'iido lahayn? Si fiican u hubaysan macluumaadkan cusub waxaan la yaabanahay haddii aan malaha in aan la baarin si faahfaahsan. Marka hore, xisaabaadka noolaha ee 97,000 ee lagu qabtay Maraykanka ayaa qiyaastii saddex meelood meel ahaan ah mid faa'iido leh, hadda maahan dhamaanba xisaabiyayaashan waxay noqon doonaan waqti buuxa oo loo qoondeeyay ganacsatada ganacsiga ee ganacsiga, qaar ka mid ah xisaabaadka ayaa loo isticmaali doonaa 'xisaabin' xisaab, sida laga soo xigtey ganacsiga (waxaanan badbaadin karnaa doodaha maskaxda ee muuqda ee ku saabsan faraqa wakhti kale).
Waa wax aan macquul aheyn in la gooyo burburinta tirooyinka dhabta ah ee ganacsatada faa'iidada leh ee xogta iyo xogta, laakiin shaxanka ka sarreeya 50% waxay noqon laheyd mid si qumman u badbaado oo aynu u qaadanno marxaladdeenna marxalad kale; Si waqti buuxa ah loo qaato, (muddo ah), inta badan waa inay ahaadaan kuwo faa'iido leh, haddii kale waxay si fudud uga bixi lahaayeen shaqada. Waxaa xiiso leh in la xusuusto meel ka sii fog oo aan ka soo wareegayno 10-ka khiyaaliga ah ee tirakoobka ah waxaan sii kordhineynaa falanqaynta qayb yar oo xog ah oo adag (audited).
Waxaa jira arrin kale oo ku wajahan dooddan ku saabsan guusha kuwaas oo sidoo kale mudan in la xuso, laga yaabo inay taageerto aragtida ah in FX ay tahay meesha ugu wanaagsan ee lagu ganacsan karo. Haddii tirada guud ee ganacsiga ganacsigu ay ku dhawaato 20%, laakiin tobanka ugu sareeya ee macaamiishooda macaamiisha Maraykanku waa dhammaantood ka sarreeya 32%, ka dibna waxaa naloo soo diray fariin muuqaal ah? Haddii aad rabto inaad sare u qaaddo fursadda ah in aad tahay ganacsade faa'iido leh ka dibna ganacsiga FX ee dulsaar sarreysa ama ka sarreeya, ama calaamadaha oo kaliya tixgeliya isticmaal (ku dhicid waxaan u sheegaa) ECIC / STP sida FXCC.
Halkan waxaan ku gaarayaa heer aad u sareeya oo aadanaha ah si aad u hadasho; Waxaan diiddanahay in aan aqbalo in qof kasta oo ka soo gudbay xanuunka ixtiraamka shantii sano ee la soo dhaafay ama wax kale, oo aan aaday meelo ka mid ah helitaankii aan ogaaday in ay ahayd khasab in la noqdo ganacsade joogta ah oo faa'iido leh, kama dambeyntii guulaysan iyada oo aan ku guuleysto waxaan soo jeedin lahaa metrik ah qaadashada mushahar joogto ah oo macquul ah ama soo-celinta maalgashiga suuqa forex. Iyo sida aan u sheegay dhowr jeer haddii aadan weerari karin 'our forex' wakhtiga buuxa marnaba 'kama soo kabsan kabaha' iyo ganacsiga waqti qayb ka mid ah dib u dhigista, taas waa raaxo ah oo kaliya ka yimaado waayo-aragnimo.
Ku noqo su'aasha ku jirta cutubka hore; "Maxay dad badan uga lumayaan ganacsiga forex iyo maxay tahay isbedelka dad badan oo ay tahay in ay sameeyaan si ay ugu noqoto in afartan boqolladood ee ku guuleysta?" Waxaan kugula tagi doonaa lix sababood oo fadlan xor ayaad u leedahay in aad ku biirto blogka adiga oo ku soo jeediya talooyinkaaga ama ku daridaada. Hadda ma'aha wax ku saabsan 'sabab la'aanta' sababaha iyo xalalka, waa liis toos ah oo aan jirin wax xamaasad ah, jawaabaha ayaa jira, xalka u muuqda.
Laakiin marka hore, dib u soo noqoshada, haddii ay ku dhow yihiin afartan boqolkiiba ganacsatada ay ku guulaysteen kadibna ku guulaystaan ​​ganacsade ganacsade faa'iido leh ayaa laga yaabaa in ay gaaraan marka loo eego sida aad horay u soo jeedin lahayd. Taasna mid ka mid ah, tiradaas oo ka sarreeya intooda badani waxay filayeen, waa in lagu dhiirigeliyaa dhiirigelinta ganacsatada qulqulaya.
Lix Sababood oo Sababta ah
Ku guuldareysiga maamulidda khatarta
Ficil - ka shakiyaan qorshaha
Isku day inaad ku qaadato dusha sare ama dusha sare
Waxay diideen inay aqbalaan khasaaro
Ganacsatada faa'iidada lehganacsadaha faa'iidada
« Miyuu Iceland ka soo kabashaday miyuu dhabarka u yahay wiilka dhabta ah ee wiilkiisa? Ma isticmaalaan macaamiisha Mareykanka oo dhan oo la iibsaday? »